သင်္ကြန် အတက်နေ့အတွက် ရွှေရင်အေး | Wutyee Food House
« သင်္ကြန်အကြိုနေ့ အတွက် မုန့်လုံးရေပေါ်
အမေရိကန်စတိုင် ၀က်နံရိုးကင် »
April 16, 2010 by chowutyee သင်္ကြန် အတက်နေ့အတွက် ရွှေရင်အေး
သင်္ကြန် အတက်နေ့က သင်္ကြန် နောက်ဆုံးနေ့လည်း ဖြစ်တာမို့ ရွှေရင်အေးလေးကို နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းမှတ်လေးနဲ့ လုပ်စားနိုင်အောင် တင်လိုက်ပါတယ်၊ စားသုံးသွားကြပါအုန်းနော်….
ရွှေရင်အေး မလုပ်ခင် ကျောက်ကျော အရင်လုပ်ကြရအောင်
ကျောက်ကျောတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
၁။ ဂါးဂါး ကျောက်ကျော – ၁ထုပ် (အထုပ်သေး)
၂။ သကြား – ၂၅ကျပ်သား
၃။ အုန်းနို့(Coconut Cream) – ဘူးကြီး တ၀က်
၁။ ဒယ်အိုး အကြီး တစ်အိုးထဲသို့ ရေသန့်ဘူး တစ်ဘူး မျှ ရေများကို ထည့်ပေးပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားပါ။
၂။ ပြီးမှ သကြား အားလုံးကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး ပျောအောင် တည်ထားပါ။
၃။ ထို့နောက် ကျောက်ကျော ထုပ်ကို ရေအနည်းငယ် ရောမွှေပြီး ဒယ်အိုးထဲထည့်၍ ညောင်းစေးသည်အထိ မကြာမကြာရောမွှေပေးပါ။
၄။ ညောင်းစေးလာလျှင် အုန်းနို့များကို ထည့်ပြီး ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ကျောက်ကျောရည်များကို ဗန်းထဲသို့ လောင်းချပြီး အအေးခံထားပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျောက်ကျော ၂ထပ်လုပ်ချင်ပါက အုန်းနို့အထည့်ခင် ကျောက်ကျောရည် တ၀က်ကို ဗန်းထဲ အရင် လောင်းချလိုက်ပါ။ ပြီးမှ အုန်းနို့ထည့်ပြီး ကျန်ကျောက်ကျောရည် တ၀က်နဲ့ရောမွှေ၍ အပေါ်မှ ထပ်လောင်းချပေးလိုက်ရင် ရပါပြီး။
၁။ မျော့ချောင်း – ၅ထုပ်
၂။ သာကူစေ့ (လုံးသေး) – ၁ထုပ်
၃။ ကောက်ညှင်းပေါင်း – ၁ထုပ်
၅။ အုန်းနို့ရည် – နို့ဆီဘူး ၁ဘူး (သို့) အုန်းနို့ (Coconut Cream) – ဘူးသေးတ၀က်
၆။ သကြား – ၃၀ကျပ်သား
၁။ သကြားများကို ဒယ်ထဲ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး သကြား အရည်ပျော်သည်အထိ ကျိုပေးပါ။
၂။ အရင်ဆုံး မျော့ချောင်း များကို အိုးတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ရေစိပ်ထားပေးပါ။
၃။ သာကူစေ့များကိုလည်း မကျိုခင် ရေစိပ်ထားပေးပြီး ဇကာပြန် ရေပြန်စစ်ထားပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် သာကူ နှင့် မျော့ချောင်းများ ကျိုရန်အတွက် ဒယ်အိုးကြီးကြီး ၂အိုးထဲ ရေများများထည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ရေဆူအောင် အထိတည်ထားပေးပါ။
၅။ ဒယ်အိုး တစ်အိုးထဲသို့ ရေပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် မျော့ချောင်းများထည့်ပြီး ၈မိနစ်ခန့် မျော့ချောင်းများ ကျက်သည်အထိ မွှေပေးပါ။ ကျက်သွားလျှင် ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၆။ ဒယ်အိုး ၁အိုးထဲသို့ ရေပွက်ပွက်ဆူလာမှ သာကူများကို ထည့်ပြီး ၄မိနစ်ခန့် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။ သာကူစေ့များကို မပြဲစေပါနှင့်။ မမွှေပေးပါက သာကူစေ့များကပ်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျက်သွားလျှင် ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၇။ ပြီးနောက် ဒယ်အိုး ကြီး တစ်အိုးထဲ ဆယ်ထားသော မျှော့ချောင်းများ၊ သာကူစေ့များ၊ သကြားရည်၊ အုန်းနို့ရည် အားလုံးကို ရောထည့်မွှေလိုက်ပါ။
၈။ ရွှေရင်အေး စားရန် ပန်းကန်ထဲသို့ ရွှေရင်အေးနှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပါမုန့်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ကျောက်ကျော ထည့်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီး….
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 19 Comments	19 Responses
on April 16, 2010 at 8:09 am | Reply နွေးနေခြည်
လုပ်နည်းလေး မှတ်သွားတယ်နော်.. ကျေးဇူး သယ်ရင်း
on April 16, 2010 at 8:14 am | Reply chowutyee
on April 16, 2010 at 8:46 am | Reply Hmone Gyi
a hint ahint i miss that food…we always do that foods at thingyan😦😥
on April 18, 2010 at 11:07 am | Reply chowutyee
မှုံကြီးရေ.. စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့.. ကိုယ်နောက်နှစ်လာရင် ငါလုပ်ကျွေးပါ့မယ်..😉
on April 16, 2010 at 9:34 pm | Reply zaw
ရွှေရင်အေး လေးကတော. ရင်ကိုအေးစေတာအမှန်ပါဗျာ အခုလို နောက်ဆုံးနေ.အမှတ်တရလေး တင်ပေးတဲ.အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မ၀တ်ရည်ရယ် မ၀တ်ရည်ကတော.ရင်ကိုအေးမြစေရန်လေးတွေကို လုပ်ပေးတယ်နော်
မြန်မာပြည် ရန်ကုန်က အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတော. အေးမြမှု.တော.မဖြစ်ဘူးဗျာ စိတ်မကောင်းမှု.တော.ဖြစ်မိပါတယ် အားလုံ့းအတွက်လဲး ၀မ်းနည်မိပါတယ် ။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မ၀တ်ရည် ရွှေရင်အေးလေးတစ်ခွက် လိုအေးချမ်းပါစေ
on April 18, 2010 at 11:06 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ပ ဇော်ရေ… ရန်ကုန်က သင်္ကြန် အကြတ်နေ့သတင်းကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ…
on April 19, 2010 at 12:32 pm | Reply zaw
နှစ်သစ်ကိုတော.ကူးပြောင်းခဲ.ပြီနော် နောက်ထပ် အသစ်အသစ်တွေကို စောင်.မျှော်နေပါတယ် ။ အလုပ်တွေများပြီး စာတွေမရေးနိုင်ရင်လဲး နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေမဲ. အချိန်တွေမှာတော. အသစ်အဆန်းလေးတွေ နဲ.ထိတွေခွင်ရပါစေ။ မ၀တ်ရည် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။ အေးချမ်ပါစေလို. ဆုတောင်းရင် နောက်ထပ် ကျိုးစာမှု.လေးတွေကို စောင်.မျှော်နေပါတယ် ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ………….
on December 7, 2010 at 5:07 am | Reply chowutyee
on August 9, 2010 at 3:10 pm | Reply thida khine
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အုန်းနို့ ကျောက်ကျော နှစ်ထပ်လုပ်နည်းလေးပါ ထပ်ထည့် ပေးထားတော့ ပိုပြီးကျေးဇူးတင်သွားပြန်ရော။ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ မှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
on August 10, 2010 at 2:16 am | Reply chowutyee
on December 26, 2010 at 3:30 pm | Reply့ူhlaing
မျော့ချောင်းလေးတွေကို ဗိုလ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ သိပါရစေ။
on December 29, 2010 at 4:03 am | Reply chowutyee
Hlaing ရေ မျှော့ချောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ၀တ်ရည်လည်း မခေါ်တတ်ဘူး။ ပြီတော့ နုိူင်ငံခြားမှာလည်း ရှာရသိပ်လွယ်မယ် မထင်ဘူး.. ဆော်ရီးနော်…😛
on April 8, 2011 at 5:45 am | Reply magyi
on April 20, 2011 at 10:50 am | Reply chowutyee
မကြီးရေ သာဓုအများကြီး ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ…
on April 16, 2011 at 4:05 am | Reply မယ်မဒီ
အတက်နေ့ဆိုတော့ မမ ပေးတဲ့ idea လေးနဲ့အကိုက်ပဲလေ
on April 20, 2011 at 10:41 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ စမ်းကြည့်ပါနော်.. ရွှေရင်အေးဆို ၀တ်ရည်က သိပ်ကြိုက်တာ..😀
on April 20, 2011 at 6:17 am | Reply war lwin
i will try….thanks sis..
on April 20, 2011 at 10:51 am | Reply chowutyee
on July 8, 2011 at 2:36 pm | Reply thuzar